अभिनेत्री वर्षा र सविन प्रेम सम्बन्धमा लाग्यो पूर्ण विराम ! – Wow Sansar
अभिनेत्री वर्षा र सविन प्रेम सम्बन्धमा लाग्यो पूर्ण विराम !
February 1, 2021 45
अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीको सविन जंग थापासँगको प्रेम सम्बन्धमा पूर्ण विराम लागेको छ । प्रेम सम्बन्धमा गाँसिएको २ वर्ष पनि नपुग्दै उनीहरुको ब्रेकअप भएको हो । सविनले आफ्नो इन्स्टाग्राममार्फत् वर्षाले आफूलाई धोका दिएको बताएका छन् । वर्षासँगका रोमान्टिक तस्विरहरु शेयर गर्दै उनले आफूलाई वर्षाले अप्ठ्यारो समयमा साथ नदिएको गुनासो पनि गरेका छन् । यद्यपि, उनले १७ महिनाको अवधिमा वर्षासँग विताएको समय असल रहेको उल्लेख गरेका छन् ।
सविनले लेखेका छन्, ‘१७ महिना अगाडि मेरो यी युवतीसँग प्रेम सुरु भयो । हजारौं हजार किमी टाढा हामीले एक अर्काको हरेक कुरालाई स्विकार गर्यौं । हामीले एक अर्कालाई खुशी राख्न धेरै कुरा गर्यौं । तर, तिमीले मेरो संघर्षको समयमा मलाई छोडेर गयौ ।’ उनले आफूलाई जीवनमा बुझ्ने मान्छे भेट्नु भन्दै वर्षालाई शुभकामना पनि दिएका छन् । सविन अमेरिकामा बस्ने गरेका छन् ।
गत वर्षको दशैंबाट वर्षा र सविनबीच प्रेम अंकुराएको थियो । यस वर्षको दशैं मनाएर वर्षा सविनलाई भेट्न पुनः अमेरिका पुगेकी थिइन् । यसपटक भने उनले सामाजिक सञ्जालको माध्यमबाट खुलेरै प्रेम सम्बन्ध व्यक्त गरिन् । यति मात्र होइन, उनले अबको दुई वर्षभित्र विवाह गर्ने तयारी भएको समेत मिडियालाई जानकारी दिएकी थिइन् । तर, अब उनीहरुको प्रेममा विश्राम लागेको छ ।
Prevरोमाञ्चक पर्यटकीय गन्तव्य जहाँ संसारका पर्यटक पुग्न मरिहत्ते गर्छन्, कति पर्छ एकरात बिताउन ?
Nextनेपालको अनौठा र अत्यन्तै शक्तिशाली मन्दिर जहाँ जे मागेपनि पूरा हुनेगर्छ,ॐ लेखि सेयर गर्नुहोस !!!
काठमाण्डौंका खोला, कराडौं घुस खाएर ब्यक्तिका नाममा पास गरिदिए
रमेश प्रसाईको सबैलाई रुʼ वाउने मा’र्मिक कथा, आमा भन्छिन् छिमेकीले नै वि’ष खुवाएर माʼ रिदेउ भन्थे-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित)
नयाँ टिभीमा रबि लामिछानेसंगै राजेश हमाल, रमेश प्रसाई, दिपकराजको एकै साथ इन्ट्री (भिडियो सहित)
निर्मलाको ज्या.न लि.ने अ.पराधीको बारेमा यस्तो सूचना प्रहरीलाई आएपछि… (1131)
कञ्चनपुरकी यी युवतीले फेसबुकबाट केटासँग लब गर्दा काेठामा लगेर घीनलाग्दाे हर्कत गरी बनाईदिए यस्ताे बिजाेग.. (1109)